‘हृदयन्द्र राजा बन्ने गरी राजसंस्था फर्कने’ भविष्यवाणी गरे !!! – News Nepali Dainik
‘हृदयन्द्र राजा बन्ने गरी राजसंस्था फर्कने’ भविष्यवाणी गरे !!!
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ११, २०७७ समय: २२:०१:१६
****नेपालमा ‘राजसंस्था अपरिहार्य’ भएको तर्क गर्दै भारतका एकजना पूर्व सचिवले टिप्पणी गरेका छन् । भारतको क्याबिनेटका पूर्व सचिव एस. रमेशले लेखमार्फत् यस्तो तर्क गरेका हुन् । रमेशले १३ जनवरीमा टेलिग्राफ इन्डियामा प्रकाशित लेखमार्फत राजसंस्था पुर्नस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपालको राजनितिमा चीनले अदृश्य भूमिका खेल्दा समेत नेकपालाई फुटबाट जोगाउने नसकेको उनले आफ्नो लेखमा भनेका छन् । चीनलाई हेर्नु वा ओलीको विकल्प खोज्नु भन्दा पनि भारतले नयाँ विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । सत्ता र कुर्सीको लोभमा नेकपा अन्ततः फुटेको र ओली समूहलाई निरन्तर प्रचण्ड र नेपालसमूहले दबाब सिर्जना गरिरहेको भनिएको छ ।
*#*नेकपाको पछिल्लो स्थितिपछि चीनले नेपालको घटनाक्रमलाई अध्ययन गरिरहेको हुनसक्ने उनको भनाई छ । बि.स २०६३/६३ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ता छाड्न लगाउन करण सिंह नेपाल पुगेको समेत स्मरण गर्दै उनले आफ्नो लेखमा राजसंस्था पुर्नस्थापना गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व लिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
*#*रमेशले विगतमा राजालाई सौहाद्रपूर्ण तरिकाले गद्दी छाड्न लगाउन कँग्रेस आईका भेट्रान नेता करण सिंहलाई भारत सरकारले काठमाडौं पठाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले अब फेरि करण सिंहलाई भारत सरकारले पठाउनसक्ने विषय उल्लेख गरेका छन् । उनको आशय राजसंस्था फर्काउन सिंहलाई भारतले पठाउने विषय रहेको छ ।
*#*पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नागरिकका रुपमा आफ्नो जीवन बिताइरहेको र पूर्व युवराज पारसलाई अहिले सम्म तीन पटक सम्म हृदयघात भइसकेको उल्लेख गर्दै हृदयन्द्रलाई भावी राजा बनाउने विषय उल्लेख गरेका छन् । पूर्वयुवराज पारसलाई जनताले राजा स्वीकार गर्न नसक्ने उनले आफ्नो लेखमा भनेका छन् ।
*#*यो विषयले नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनमा तरंग पैदा गराएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र २०४७ सालको संविधान पुर्नस्थापनामा लाग्नु पर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
Last Updated on: January 24th, 2021 at 10:01 pm